You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Diseases / Sjogren’s syndrome
မိတျဆှေ တစျဦး ၏ ပွဿနာ နဲ့ ပတျသကျ ၍ ဖွေ ဆိုု ပွ ခကြျ အပိုုငျး ( ၁ )
Sjogren’s syndrome ဆိုု တာ ------
နာတာရှညျ autoimmune ရောဂါ တစျ မြိုး ဖွစျ ပါ တယျ။
Auto immune ဆိုု တာ က တော့ အကွောငျးကွောငျး ကွောငျ့ ခန်ဓာကိုုယျ ခုုခံအား တှေ ကစဥ့ျကလြား ဖွစျ ပွီး မိမိ ခန်ဓာကိုုယျ မှာ ရှိ တဲ့ ကလာပျစညျးအဖှဲ့ အစညျး တှေ ကိုု ရနျသူ ထငျ မှတျ ပွီး ဖကြျစီး ပွစျ တာ ဖွစျ ပါ တယျ။
တစျယောကျ နဲ့ တစျယောကျ ဖွစျ တဲ့ နေ ရာ တှေ မတူ ကွ တာ မိုု့ ၊ ဖွစျ တဲ့ နေ ရာ အလိုုကျ ရောဂါ နာ မညျ မြိုး စုုံ တပျ ပွီး အထူးကုု မြိုးစုုံ က ဆေး မြိုးစုုံ နဲ့ ကုု နေ ကွ တာ သာ ဖွစျ ပါ တယျ။
အခုု ဖောျ ပွ မဲ့ ရောဂါ က တော့ ခန်ဓာကိုုယျ ခုုခံ အား တှေ ဟာ moisture producing glands လိုု့ ခေါျ တဲ့ အစိုုရဓောတျ ထုုတျ ပေး တဲ့ အကွိတျ တှေ ကိုု ဖကြျ စီး ခွငျး ဖွစျ ပါ တယျ။
ဒီ တော့ ကာ၊ အဓိက အား ဖွငျ့ ဒီလူနာ ရှငျ တှေ ဟာ အာခွောကျ မယျ၊ မကြျစိ ခွောကျ မယျ ပေါ့။
အခွား ဖွစျ နိုုငျ တာ တှေ က တော့ အသား လဲ ခွောကျ နိုုငျ တယျ၊ခြောငျး ခွောကျ ဆိုုး နေ တတျ တယျ၊ မိနျးမကိုုယျ ခွောကျ မယျ၊ လကျမောငျး နဲ့ ခွသေလုုံး ထုုံ ကငြျ နေ တတျ တယျ၊ ပငျပနျး နှမျးလြ နေ တတျ တယျ၊ အသား နဲ့ အဆစျ တှေ နာ တတျ ပါ တယျ၊
Thyroid ပွဿနာ တှေ လညျး ရှိ တတျ ပါ တယျ။
ဆေးပညာရှငျ တှေ ထငျ တာ က တော့၊ ဗီဇ မှာ ကိုု ပါ လာ တတျ တယျ။ ဒီ ဖွစျ နိုုငျ တဲ့ ဒီဗီဇ အပေါျ မှာ အစား အသောကျ အနေ အထိုုငျ ပါ မသငျ့တငျ့ မလြောကျ ပတျ ဖူး ဆိုု ရငျ၊ ဒီ ရောဂါ ပေါျ လာ တတျ ပါ တယျ။
ဗီဇ ကွောငျ့ ဖွစျ တယျ ဆိုု တာ က တော့ တရားသဘော နဲ့ ပွော ရ ရငျ ကံ ထဲ မှာ အကွုံး ဝငျ ပါ တယျ။
နောကျ ဆုုံး မ တော့ ကံ၊ စိတျ၊ ဥတုု၊ အာဟာရ ပဲ ဖွစျ ပါ တယျ။
မိတျဆှေ တိုု့ အတှကျ က တော့ ဒီ လောကျ နားလညျ ရငျ ပဲ အတောျ လေး ဟုုတျ နေ ပါ ပွီ။
ကုုရိုုးကုုစဉျ နညျး ဖွစျ တဲ့၊ အကြိုး တှေ ကိုု သာ ဦး တညျ သညျ့ Conventional medicine နဲ့ ကုု ပုုံ တှေ က တော့ ---
၁. အား ကောငျး နေ တဲ့ ခန်ဓာကိုုယျ ခုုခံအား ကိုု အားယုုတျ သှား ရ အောငျ ဖိနှိပျ တဲ့ ဆေး တှေ
ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယျ။
ဥပမာ ဒီ လူ နာ သောကျ နေ တဲ့ ဆေး တစျ မြိုး ဖွစျ တဲ့ Mofilet ( မြားသောအား ဖွငျ့ transplant လူနာ...ကြောကျကပျ၊အသဲ၊နှလုုံးအစားထိုုးပွီး .... သုုံး တဲ့ ဆေး ဖွစျ ပါ တယျ )
၂. Medixon လိုု့ ခေါျ တဲ့ methylprednisolone ( steroid ) ဖွစျ ပါ တယျ။ ဘေး တှကျ ဆိုုးကြိုး တှေ က လဲ အမြား ကွီး ဖွစျ ပါ တယျ။ အယောငျ ကြ အောငျ ပေး တာ နဲ့ တူ ပါ တယျ။
ဒီ လိုု မြိုး လူ နာ တှေ ဟာ ဒီ ဘေးတှကျ ဆိုုး ကြိုး တှေ အလှနျ မြား တဲ့ ဆေး တှေ သောကျ ပွီး ၊ဒီ လိုု တရှောငျရှောငျ နဲ့ ပဲ၊ ဆကျ ပွီး သှား နေ ကွ တာ ဖွစျ ပါ တယျ။
အကွောငျး အကြိုး ကုု တဲ့ ဆရာဝနျ တှေ က တော့ အကွောငျး ကိုု ဦး တညျ ပွီး ကုု ကွ ပါ တယျ။
ခန်ဓာကိုုယျ ခုုခံအား ကစဥ့ျ ကလြား ဖွစျ ရ တဲ့ အကွောငျး တှေ က တော့ အဓိက အစာလမျးကွောငျး မကနြျးမာ လိုု့ ဖွစျ ရ တာ ပါ။
အစားလမျးကွောငျး အထူးသဖွငျ့ အတှငျး အူနံရံ ယောငျကိုုငျ ခွငျး ကွောငျ့ မကွေ့ တကွေ အစာ မြား၊ အူ က နေ စုုတျ ယူ သှား တဲ့ အခါ ( leaky gut ) ခန်ဓာကိုုယျ က ရနျသူထငျ ပွီး နှိမျနှငျး ဖိုု့ အယောငျဓာတျ တှေ နဲ့ တိုုကျ ခိုုကျ တဲ့ အခါ ခုုခံ အား တှေ စ ပွီး ကစဥ့ျကလြား ဖွစျ ပါ တော့ တယျ။
ဒီ လူနာ မှာ က တော့ ခုုခံအား တှေ ဟာ အစိုုဓာတျ ထုုတျ ပေး တဲ့ အကွိတျ မြား ကိုု စ တငျ ပွီး တိုုကျ ခိုုကျ တာ ကွောငျ့ အစိုုဓာတျ တှေ ခွောကျ ခမျး ပွီး ရောဂါ မြားဝငျ လာ ရ ခွငျး ဖွစျ ပါ တယျ။
အဓိက အား ဖွငျ့ အူနံရံ ပွနျပွီး ကနြျး မာ လာ ရ အောငျ လုုပျ ရ မှာ ဖွစျ ပါ တယျ။
၁. မတညျ့ သညျ့ အစား အစာ မြား ကိုု ရှောကျ ကွဉျခွငျး
(က) Gluten ---- ဂြုံ နှငျ့ ပတျသကျ သညျ့ အစာ မြား။
ဥပမာ --- ပေါငျမုုနျ့၊ ကိတျမုုနျ့၊ ဂြုံ ခေါကျဆှဲ၊ ရှှကွေညျ စသညျ ဖွငျ့ ဖွစျ ပါ တယျ။
သကျသတျလှတျ အသားတုု မြား လုုံးဝစား လိုု့ မရ ပါ။
Gluten drinks အားလုုံး --- ဥပမာ Milo, Horlicks, Ovaltine စ သညျ ဖွငျ့ ဖွစျ ပါ တယျ။
(ခ ) နှားနိုု့၊ ထောပတျ၊ cheese
(ဃ ) ပဲ မြိုးစုုံ
(င) Night shade vegetables ခရမျးသီး၊ ခရမျးခဉြျသီး၊ အာလူး
၂. ကောငျးတာ၊ သငျ့ တောျ တာ နဲ့ ပွနျလညျ ဖွညျ့စီး ပေး ခွငျး.........
(က) အစာကွေ ရ အောငျ အကျစစျဓာတျ ပွနျ လညျ ဖွညျ့ ပေး ခွငျး
Rae organic unfiltered apple cider vinegar လဘကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး ကိုု ရေ ၈ အောငျစ နဲ့ ရော ပွီး ထမငျး မစား ခငျ သောကျ ရ မှာ ဖွစျ ပါ တယျ၊
( ခ) အစာကွဆေေး Digestive enzymes ကိုု အစာ မစား ခငျ နာရီဝကျ လောကျ အလိုု မှာ သောကျ ပါ။
Life Extension company မှ ထုုတျ တဲ့ enhanced digestive enzymes က ကောငျး တယျ လိုု့ ထငျ ပါ တယျ။ Amazon.com က နေ မှာ လိုု့ ရ ပါ တယျ။ မရ နိုုငျ ရငျ လညျး မွနျမာပွညျ က ထုုတျ တဲ့ အစာကွဆေေး ကိုု ဝယျ သောကျ သငျ့ ပါ တယျ။
၃. အကြိုးပွုပိုုး တှေ နဲ့ ပွနျ ဖွညျ့ ပေး လိုုကျ ပါ။
Probiotics 30-50 billion countaday သောကျ လိုုကျ ပါ။ မဝယျ ခငျ ဖတျ ကွညျ့ ပါ။ ကိုုယျ က ရောဂါ ဖွစျ နေ ပွီ ဆိုု တော့ အကောငျရေ မြားမြား သောကျ ရ မှာ ဖွစျ ပါ တယျ။
ခဉြျဖတျ နေ့စဉျ မှနျမှနျ စား ပါ။
ကငျခြီ၊ ရှမျး ခဉြျ စ သညျ ဖွငျ့ စား ပေး ရ မှာ ဖွစျ ပါ တယျ။.
၄. ပကြျ နေ သော အူ အတှငျး နံရံ ကိုု ပွနျ ပွငျ ပေး ရ မှာ ဖွစျ ပါ တယျ။
L Glutamine powder သောကျ ပါ။
brand အမြိုးမြိုး ရှိ ပါ တယျ။ Amazon.com က နေ မှာ ယူ လိုု့ ရ ပါ တယျ။
1 teaspoon mixed with water မှနျမှနျ သောကျ ပါ။
သိုု့မဟုုတျ၊အရိုုး ပွုပျ ရေ သောကျ ပါ။
Carlson Cod liver oil အရေ တစျနေ့ ထမငျးစားဇှနျး နဲ့ သောကျ ပါ။
တစောငျး လကျပတျ အထဲ က gel ကိုု စား ပါ။
ပွု ပွငျ ပွီး အစား မြား မစား သငျ့ ပါ။ processed food
VitaminD3 level ဖောကျ ကွညျ့ ပါ။
မဖောကျ နိုုငျ ဖူး ဆိုု ရငျ VitaminD3 10,000 IU plus super k one daily သောကျ သငျ့ ပါ တယျ။
ခန်ဓာကိုုယျ အပူ ခြိနျ တိုုငျး ကွညျ့ ပါ။
97.8 အောကျ လြော့ နေ ရငျ metabolic advantage မနကျ၃လုုံး၊ နေ့လညျ ၃ နာရီ လောကျ ၃ လုုံး ကိုု သောကျ ပါ။
Super selenium complex 200 microgram တစျနေ့ တစျ လုုံး သောကျ ပါ။
ကွိုးစား ပွီး လိုုကျ နာ မယျ ဆိုု ရငျ ဖွစျ ပွီး သား ရောဂါ လဲ သကျ သာ လာ နိုုငျ ပါ တယျ။
ပိုု ပွီး လဲ မဆိုုး သှား နိုုငျ ဖူး လိုု့ ထငျ ပါ တယျ။
ကံကောငျး ရငျ လဲ ပွနျ ပွီး ဖွေးဖွေး ကောငျး လာ နိုုငျ တယျ လိုု့ ထငျ ပါ တယျ။
Sjogren’s Syndrome ရောဂါ လူနာ ရှင် တစ်ဦး ဆီ မှ --------
ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာမကြီးခင် ဗျာ ယ္ခုစာကို ကျ နော့သူငယ် ချင် းကိုပြန် မျှ ဝေကြည် ့လိုက် ပါတယ် သူက တောင် စောပြီးသိ နေလို့ ဆရာမကြီး ဆေးနဲ့ကုတာ တော် တော် လေး ကောင်းနေတယ် လို့သိရပါတယ် ဆရာမကြီး ဆေးနည်းတွေဟာ တကယ် လက် တွေ့ သက် သာ ကြောင် းအများသိ စေရန် ကျ နော့သူငယ် ချင် းစာ လေးကို ပြန် လည် မျှ ဝေ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
“ ဖိုုးတီရေ။ အဲဒါ ငါ့ ရောဂါ ဘဲ။
ငါ လွန် ခဲ့တဲ့ နှစ် တွေ က စလုုံး မှာ သွားလိုုက် ပြန် လိုုက် ကုု နေ ရ တာ လေ။
နောက် ဆရာမကြီး ရဲ့ ဆေး တွေ နဲ့ မှ ငါ သက်သာတာ။
ခုု အာမခြောက် တော့ ပဲ ပုုံမှန် ဖြစ် နေ ပြီ ”